२० लाख बढी नक्कली नोट बजारमा पुगेपछि सुदूरपश्चिमका शहरहरुमा आतंक « News24 : Premium News Channel
२० लाख बढी नक्कली नोट बजारमा पुगेपछि सुदूरपश्चिमका शहरहरुमा आतंक
१, २० लाख बढी नक्कली नोट बजारमा पुगेपछि सुदूरपश्चिमका शहरहरुमा आतंक
नक्कली नोटको आतंकले आक्रान्त छ अहिले सुदूरपश्चिम । बजारदेखि लिएर हरेक आर्थिक कारोबारमा नक्कली नोटको उपस्थिति बढेपछि व्यवसायी मात्र नभएर उपभोक्ता समेत त्रसित छन् । धनगढीमा केही दिन अघि नक्कली हजार दरका नोटसहित नोट छाप्ने मेसिन पक्राउ परे पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो आतंक बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले नक्कली नोटको कारोबारमा सतर्कता बढाउन अपिल गरेसंगै उपभोक्ता र व्यवसायीमा झनै चिसो पसेको छ । नक्कली नोट छाप्ने गिरोहले २० लाख बढी नक्कली नोट छापेर बजार पठाइसकेको कारणले पनि बजारमा भनै अविश्वास थपिएको छ ।
२.बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कैलालीकी माया विकले कहिले पाउने हुन न्याय ?
‘ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु सरह हो’ विश्वभरकै न्यायिक क्षेत्रमा सर्वाेपरि मान्यता बोकेको भनाइ हो यो । तर नेपालको न्याय क्षेत्र भने यो भनाइप्रति कहिल्यै पनि संवेदन भएको पाइदैन ।
त्यसमाथि पनि महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार , जिउ मास्ने बेच्ने जस्ता मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गरेर चाँडै टुंग्याउनु पर्ने अदालती प्रावधान छ । तर कैलाली जिल्ला अदालतले एक किशोरीको बलात्कार पछि भएको हत्याको मुद्दामा फाइल अघि सार्न अन्कनाउदै आएको छ । एक बर्ष अघि साउन १३ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर भएको यो मुद्दाको पेशी मात्र ५ पटक सरिसकेको छ ।
बलात्कार पछि निर्मम हत्या गरिएकी माया विकको परिवारलाई यो घटना पछि प्रदेश सरकारले ५ लाख र गौरीगंगा नगरपालिकाले १ लाख राहत स्वरुप दिए । तर अदालतको निर्णयबाट मात्र आफ्नी छोरीले न्याय पाउने भन्दै मायाको अभिभावकले राहत रकम अस्वीकार गरेको छ । के अब पनि मायालाई माया गर्न र न्याय गर्न ढिलाइ गर्ने ? यो प्रश्न कैलाली जिल्ला अदालततर्फ तेर्सिएको छ ।
३.३३ बर्ष टेक्दा पनि पूरा भएन डडेल्धुराको मनसुता सिंचाई आयोजना
एउटा योजना पूरा हुन कति समय लाग्ला ? यो प्रश्नको जवाफ योजना निर्माण गर्दाको फेहरिस्तमा उल्लेख गरिएको हुन्छ नै । २,४,५ या बढीमा १० बर्ष सम्मको समयसीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ नेपाली परिवेशमा ।
तर डडेल्धुरा जिल्लाको नवदूर्गा गाउँपालिकाको कोटलीमा निर्माण भइरहेको मनसुता सिंचाई योजना ३३ बर्ष पुग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । हेरक बर्ष केन्द्रीय बजेटमा समेटिन्छ यो योजना । तर सिंचाई योजनाको उपभोक्ताहरुबीच समिति गठन गर्ने र सिंचाई योजनाको मुल छनौटमा विवाद हुँदा ३ दशक बढीदेखि यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
योजना प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले आआफ्नै तर्क र दम्भ अघि सार्दा घाँटी निमोठिएको अवस्थामा रहेको यो योजना पूरा हुन सके विवादमा दौडिरहेका उपभोक्ताहरुले नै ठूलो राहत पाउने निश्चित छ । तर स्वार्थ र दम्भको अघि कस्को के लाग्दो रहेछ र ?